जो मागेर खान्थिन् उनैलाई कोरोनाले लग्यो
दाङ : एक हप्ता जति भएको थियो उनले घोराहीको ट्राफिक चोक वरपर आवत जावत गर्न थालेको। राति चोकको पेटीमा सुत्ने र दिनभर वरपरका पसल र घरमा मागेर हिँड्नु र त्यही बसेर खानु उनको दैनिकी थियो।
एक सातासम्म उनीमाथि नजर परे पनि उद्धार र व्यवस्थापन गर्न तर्फ कसैको चासो देखिएन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको घोराहीमा उनी प्रति ध्यान पनि कसैको भएन। उनी को हुन ? कहाँकी हुन ? अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन।
अन्दाजी ३०/३५ वर्षकी उनी एक साता राम्रै अवस्थामा थिइन्। बिहीबार अचेत अवस्थामा देखिएपछि घोराही उपमहानगरपालिकाको नगर प्रहरी र वडा प्रहरी कार्यालयले उनको उद्धार गर्दै उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याए।
घोराही उपमहानगरपालिका–१५ (ट्राफिक चोक) गुम्राह चोक प्रतिक्षालयको बेञ्चमा वेवहारिसे अवस्थामा भेटिएकी महिलालाई प्रहरीले उद्धार गरेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याएको थियो।
उपचारकै क्रममा तीन दिन पहिले ती महिलाको मृत्यु भयो। मृत्युपछि संकलन भएको उनको स्वाब रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। बेन्चमा सुतेको र स्वास फेर्न गाह्रो अवस्थामा देखेपछि प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्‍याएको बताएको छ। ती महिलाको अहिलेसम्म नाम ठेगाना खुलेको छैन।
वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक दिनेश रिमाल र घोराही उपमहानगरपालिकाको नगर प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक रुद्र पन्थीले सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग गरेर ती महिलालाई उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुर्‍याएका थिए।
केही दिनदेखि चोक आसपासमै बस्ने र मागेर खाने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। केही स्थानीयले उनलाई खानेकुरा दिएको बताए पनि उनको बारेमा केही थाहा नभएको बताएका छन्।
घोराही सडक मानव मुक्त नगर हो। केही समय अघि नगरलाई औपचारिक रुपमा नै घोषण गरिएको थियो। सडक मानव मुक्त नगरमै बेवारिसे महिना भेटिनुले पनि ठूलो अर्थ राखेको स्थानीयको भनाइ छ।
‘उद्धार गर्दा मुख बाट फिज आइरहेको थियो’
वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिनेश रिमालले ती महिलाको कठिन अवस्थामा उद्धार गरिएको बताए। बेवारिसे अवस्थामा ट्राफिक चोकमा भेट्दा सास फैर्न असहज भएको अवस्था देखिएको र मुखबाट फिज आइरहेको थियो। ‘अवस्था जटिल र शंकास्पद देखिएपछि सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेर अस्पतालसम्म लिएर गएका हौँ’, उनले भने, ‘पछि उपचारको क्रममा उहाँको मृत्यु भएको सुनियो। शुक्रवार कोरोना पुष्टि भएको खवर पनि आयो। म अहिले होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छु।’
उद्धारमा सामान्य सावधानी अपनाइए पनि उनीहरुसँग सबै आवश्यक सामग्री थिएन । उनको उद्धारमा संलग्नको अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षण भने भएको छैन। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा गोपाल शर्माले लेखेका छन् ।